Fitaovana sy mpamatsy trano famaohana fasika any China - Puhua
Home > Products > Trano fanamoriana fasika
Ny fantsom-bozaka famaohana fasika dia natao indrindra hanadiovana ireo faritra lehibe amin'ny vy, ny sambo, ny chassis an'ny kamio mba hanesorana ny toerana maloto, ny rusty layer ary ny cinder amin'ny vy mba hahazoana fanamiana vita amin'ny metaly sy malefaka ary manjelanjelatra izay mamela ny kalitaon'ny fanatsarana sy ny fahombiazan'ny fanoherana ny harafesina.
Ny tanjaky ny vy dia mihamafy, ary maharitra ny androm-piainan'ny sangan'asa. Ny trano famaohana fasika famaohana maina dia manana vilany fanapoahana fasika, mpanangona vovoka, trolley ary rafitra mivezivezy masiaka.
Ny haben'ny efitrano mety dia miankina amin'ny haben'ny sangan'asa lehibe indrindra ezahinao hipoaka. nytranoheva sandblastingtokony ho ampy handraisana ny sangan'asa lehibe indrindra ary hanome toerana malalaka hipetrahan'ny mpiasa manapoaka. Manoro hevitra izahay ny 1-1.5m ny sehatr'asa manodidina ny blaster.
Tombony amin'nyTrano fanapoahana fasika:
Easy-Maintainable Trano fanamoriana fasika dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Trano fanamoriana fasika dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Trano fanamoriana fasika miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.